Xiddig uu ku xisaabtamayey Tababare Zidane oo ka dhaawacmay Kooxda Real Madrid… (Miyuu seegi doonaa kulanka El Clasico?) – Gool FM
Xiddig uu ku xisaabtamayey Tababare Zidane oo ka dhaawacmay Kooxda Real Madrid… (Miyuu seegi doonaa kulanka El Clasico?)
(Madrid) 03 Okt 2020. Waxaa halkeeda ka sii socota inkaarta dhaawacyada Kooxda Real Madrid, iyadoo uu hadda qolka daweynta Los Blancos ku biiray xiddig uu ku xisaabtamayey Macallin Zidane.
Daafaca garabka midig ee Real Madrid, Alvaro Odriozola ayuu soo gaaray dhaawac qalbi jab ku riday Macallin Zidane iyo Jamaahiirta kooxda ka dhisan Caasimadda, maadaama Madrid ay horay inuu dhaawacmay laacibkii ay Alvaro Odriozola isku booska ahaayeen ee Dani Carvajal.
Waxa ay Los Blancos qorsheynaysay inay Alvaro Odriozola ku buuxiso booska uu ka dhaawacmay Carvajal, kaasoo ay shalay uun shaaciyeen inuu garaamada la maqnaanayo muddo labo bilood ah.
Dhaawac Alvaro Odriozola ayaa ka dhisan in Tababare Zidane uusan haysan daafac garabka midig ka ciyaara kulanka ay berri ka horjeedaan Levante.
Waxaa suurogal ah in Zidane uu booska daafac midig berri ka ciyaarsiiyo Lucaz Vazquez oo booskiisa saxda ah uu yahay garab weerar, haddiiba uusan Ferland Mendy u adeegsan booskaas oo uusan Marcelo ku soo bixin booska daafaca bidix.
Si kastaba ha haatee, Real Madrid waxa ay xaqiijisay in Alvaro Odriozola uu la dhibtoonayo dhaawac ka soo gaaray lugta bidix, iyadoo la filayo inuu garoomada ka maqnaan doono muddo labo illaa saddex isbuuc ah.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in haddii Alvaro Odriozola uusan waqtiga uu dhaawaca la maqan yahay ka badan inta la qorsheynayo haatan uu daafacan diyaar u noqon doono kulanka El Clasico ee 25-ka bishan October ay la leeyihiin kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona.
Kooxda Juventus oo ay ka go’an tahay inay la wareegto Federico Chiesa saacadaha yar ee suuqa kala iibsiga ka haray
Shaxda rasmiga ah kulanka London Derby ee Kooxaha Chelsea iyo Crystal Palace oo la shaaciyey… (Hudson-Odoi oo ku bilowday iyo Kepa oo Keydka ku jira)